Fahasalamam-bahoaka : Paramed 346 noraisina ho mpiasam-panjakana -
AccueilSosialyFahasalamam-bahoaka : Paramed 346 noraisina ho mpiasam-panjakana
Fahasalamam-bahoaka : Paramed 346 noraisina ho mpiasam-panjakana
30/11/2017 admintriatra Sosialy 0
Ho fanatsarana ny sosialim-bahoaka, dia mitohy hatrany ny ezaky ny fitondram-panjakana ho fampandrosoana ny firenena. Hita taratra izany eo amin’ny fametrahana fotodrafitrasa, na eo amin’ny lafin’ny fanabeazana, na eo amin’ny sehatry ny fahasalamana. Mahakasika ity farany, Paramed miisa 346 no nivoaka ho lasa mpiasam-panjakana, omaly, teny amin’ny HJRA. Naharitra telo taona ny faharetan’ny fiofanan’izy ireo, ary hiasa manerana an’i Madagasikara. Isan’ny ezaka vitan’ireto andiany ireto ny ady tamin’ny valanaretina pesta. Nizara dimy ny fiofanana nataon’izy ireo, ny sasany nandalo tao amin’ny IFIRP eto Antananarivo, sasany avy tamin’ny sehatra tsy miankina, nisy avy tamin’ny ISPC, ary nisy avy any PIVO Ifanadiana no anisan’ny nanome tanana tamin’ny fivoahan’ireto andiany ireto.
Ezaka lehibe izao hoy ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Profesora Andriamanarivo Mamy Lalatiana, ho fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka, ho fanaporofoana ihany koa fa mila hamafisana ny rafitra ara-pahasalamana satria ny vahoaka no zava-dehibe. Ny fanjakana malagasy tsy mikendry afa-tsy ny fanatsarana ny rafitra ara-pahasalamana, izay avy eny ifotony. Nomarihiny tamin’ireto andiany ireto koa fa mila fitiavan-tanindrazana ny asan’ny paramed, satria ho an’ny vahoaka ny asan’ny fahasalamana.